Qiimaha Ganacsiga ee Forex Trading Live Ku noolaanshaha lacagaha lacagaha ah ee bilaash ah
WARQADAHA LOOSA CODSIGA
Home / Trading / Qalabka Forex / Qiimaha Live Forex
Shaxda Shaxda Forex
Dhaqdhaqaaqa, noolasha, miisaanku wuxuu siiyaa aragti daahfuran oo ku salaysan qiimaha dhabta ah ee suuqa waxayna ku faaftaa inta lagu jiro saacadaha suuqa. Iyadoo loo marayo STP (toos loo marayo habka lagu shaqeeyo), amarkaaga waxaa la geeyaa ECN-ga (shabakada elektaroonigga ah), oo ah tartan ganacsi oo degdeg ah, barkadeena bangiga dhexe. Sida si cad loo arki karo, xigashooyinkan nool waxay ku jiraan isbeddel joogto ah oo isbeddel ah, sida Suuqa Suuqa. Markaad ganacsigaaga dhigto, adigoo u maraya boodhka aad dooratay, waxaad heli doontaa qiimaha dhabta ah ee suuqa nool iyo faafitaanka ugu wanaagsan ee la heli karo, ma aha fara-gelin sugan, fara badan.
FXCC ma jirto faragelin, hadafkayagu waa inaan helno amarkaaga sida ugu dhakhsaha badan. Ma shaqeyno miiska macaamilka ganacsiga "macaamil ganacsi" mana aynaan "suuqa samayn" FX. Amarkaaga waxaa laga baaraandegayaa nooca ganacsi ee STP / ECN sida ugu wanaagsan ee suurtogalka ah, hubinta inaad ganacsi u leedahay sida ugu macquulsan ee suurtogalka ah.
Xaqiiji Quotes Live Live